Chishandiso Mashini Vagadziri - China Chishongedzo Machinery Vatengesi & Fekitori
LQMG Series Plastiki Crusher
Yese iyo rotor bhokisi kupwanya hopper yeLQMG akateedzana kugadziridza kuwedzera kupwanya goho rehomwe zvinhu, senge mabhodhoro epurasitiki uye zvimwe zvinorova modling zvigadzirwa, uye kugadzirisa kupwanya maitiro.
Mvura yakanyorova screw chiller
Iyo inopinza semi yakavharwa twin-screw compressor inosarudzwa. Inofananidzwa neyekudzoreredza compressor, ine hunhu hwekushanda kwakanyanya, kushanda kwakanyarara, kushanda kuri nyore uye hupenyu hwakareba hwebasa.
Bhokisi mhando (module) mvura chiller unit
Hupfumi uye zvakadzikama: firiji compressor inotora iyo yakatumirwa kunze mhando inozivikanwa yakakomberedzwa mhando compressor.it ndeye ruzha rudiki, kushanda kwakanyanya, uye ine ine inoshanda kupisa kuchinjana kupisa mhangura chubhu, kuendesa mafiriji vharafu zvikamu. Inoita kuti chiller ishandiswe kwenguva yakareba uye inomhanya zvakatsiga.
Bhokisi mhando (module) yemhepo inotonhora chiller
Hupfumi uye zvakadzikama: firiji compressor inotora iyo yekunze mhando inozivikanwa yakakomberedzwa mhando compressor.it ndeye ruzha rudiki, kushanda kwakanyanya,
Easy oparesheni: mashandiro ezuva nezuva echiller ano tarisa pane inodzora pani, uye nyore kushandisa, .unogona kuiisa nekutenga SEIMENS PLC,
Yakazara frequency kutendeuka chiller
Energy kuchengetedza zvakanakira: compressor, fan, mvura pombi frequency kutendeuka tekinoroji ndiyo yepamusoro zvigadzirwa.
Tembiricha yakadzika (module) chiller unit
Iyo midziyo yakanyatsogadzirirwa simba rekuchengetedza system, inoshandisa tekinoroji yepamberi, zvigadzirwa zvinosiya mvura yepamusoro -20 ℃ uye inogona kudzora tembiricha yeforoma pazasi -5 ℃.
LQQA Horizontal Ruvara Chisanganiso
Stainless simbi dhiramu uye mapaduru ane ngura yemahara uye iri nyore kuchenesa. Hopper inogona kurerekera seanosvika zana madigiri kuti zvive nyore kudzikisa zvinhu.
LQQB Vertical Ruvara Chisanganiso
Kutsanya zvakaenzana kusanganisa, yakaderera simba kushandiswa uye yakakwira kugadzirwa. Tsoka diki uye yakashongedzerwa nema castors ekufambisa. Planet-cycloid yokuderedza inogara uye yakaderera ruzha. Yekuchengetedza switch inovimbisa muchina unoshanda chete kana muvharo wavharwa.
LQQD Kuomesa Ruvara Chisanganiso
Temperature uye timer marongero vari mune chimwe chinhu chinyore kugadzirisa. Zvinhu zvakasanganiswa mukamuri yakavharwa; dhiramu yaive nekaviri insulating dura yekuchengetedza kupisa. Bhari rakagadzirwa nesimbi isina tsvina yekuchenesa nyore. Maaramu ekuwedzeredza mota.
Rotary Ruvara Musanganiswa
Bhari rakagadzirwa nesimbi isina chinhu ine simbi ine pamusoro wakakwenenzverwa. Kutenderera kwe360-degree kunotendera kunyangwe kusanganisa uye nyore kudyisa zvinhu Fender inodzivirira vashandisi kupinda mukati meiyo muchina kuti uve nechokwadi chekuchengetedza